Iyi ndiyo WeLoop S3 kubva kuXiaomi iyo inosvika kuzokwikwidza neApple Watch | Ndinobva mac
Iyi ndiyo WeLoop S3 kubva kuXiaomi iyo inosvika kuzokwikwidza neApple Watch
Xiaomi yakapa kurohwa kusingatarisirwi kweApple uye ndeyekuti nezuro yakaisa pamusika mukwikwidzi mutsva wayo Apple Tarisa Nike +. Zvaita WeLoop S3, wachi yakatarisana nenyika yemitambo inotaridzika chaizvo, yakafanana neApple Watch kubva kuCupertino.
Zvakare zvakare pfungwa yechigadzirwa chaApple inoteedzerwa kana kuturikirwa zvakatendeka neimwe mhando uye ndeyekuti pamusoro pemwedzi vazhinji vagadziri vezvigadzirwa zverudzi urwu vakaziva kuti iyo iri kubudirira zvakanyanya iApple Watch.
Iyo WeLoop S3 iwachi ine dialangular dhayana seApple Watch iyo inouya mumitatu mitatu yakasiyana uye ine mutambo wemitambo kwazvo. Kana iri tambo, tinogona kuona kuti iyo pfungwa yeyakaomeswa micro iyo Apple yakashandisa muApple Watch Nike + mabhande akaendeswa kunze kwechirevo chevara kune rimwe divi uye mumwe mukati.
Kana ari iwo mutengo, isu tinofanirwa kukuudza iwe kuti haina chekuita neApple uye tinogona kuiwana ye79 euros. Isu tinoona uyu mutengo wakaderera kwazvo, saka kana ukatanga kusvika kune vatengi tichaona kana mhando ichienderana nemutengo. Iyo ine 1.28-inch LCD skrini ine resolution ye176 x 176, GPS uye GLONASS pamwe ne sensor yemoyo.
Nezve kuzvimiririra kunovimbiswa naXiaomi, zivisa kuti vanofungidzira kuti ichagara ingangoita mazuva makumi matatu saka inosiya bhitumini pakukwirira kwe Apple Watch Muchikamu ichocho. Nekudaro, isu tinofanirwa kuziva kuti iro rekushandisa simba uye ruzivo iyo ino nyowani Xiaomi wachi inotipa isu haisi kana iyo diki diki padyo pane izvo zvatiinazvo neApple Watch.
Kurema kwayo kuri 38 gramu uye kukora kwayo kuri 11.15 mm izvo zvinoita kuti itetepete zvishoma pane iyo Apple Watch kunyangwe ichinyanya kurema. Inodzivisa mvura zvakakwana kusvika pamamita makumi mashanu pakadzika. Kuti upedze iwe unofanirwa kuziva kuti inorekodha nhanho uye nhambwe yakafambiswa, pamusoro pekuongorora maitiro ako uye unogona kuisanganisa nefoni dzeApple asi kwete ku iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyi ndiyo WeLoop S3 kubva kuXiaomi iyo inosvika kuzokwikwidza neApple Watch
Ini ndinofunga pane typo mumusoro wepositi. Iwe waisa <>, Panzvimbo ye <>
Pindura kuna mangel2
Asi kana chiri chiratidzo. Kwikwidzana naani?
Hahahahaha makwikwi anodaro
Kukwikwidza? Kana iri sekasio yevakare.
MacBook Pro pfungwa isina yepanyama keyboard, ese anobata
4 mitambo mikuru yekuti iwe unakirwe vhiki ino